Cheelsiin Arsenaaliin yoo moo’atu Manchastar Siitiin Weest Hamiin injifatame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Cheelsiin Arsenaaliin yoo moo’atu Manchastar Siitiin Weest Hamiin injifatame
Riyaal Maadriidis Granadaa 1 - 0'n moo'ateera
Hedduun namaa tasa kana hin eegne. Kanniin xiinxallaa kubbaa miilaa laatanis kuni ni ta’a jedhanii hin tilmaamne. Cheelsiin yeroo dheeraadhaaf injifatee dirree bayuu dagate Arsenaaliin ni moo’ata, Manchastar Siitiin muummee Priimer Liigii irra jiru ammo Weest Hamiin nirukutama jedhee kan eege heddu hinturre. Dhuma irratti kan ta’e hundi diraamaadha jechuun nidanda’ama; keessumaayyuu taphni Cheelsiifi Arsenaaliin jiddutti geggeeffame.
Arsenaal taphicha taphattoota 11’n eegalus hedduu osoo hinturin dhuma marsaa 1ffaa irratti kan gara nama 10’tti gadi bu’e. Sanitti hindhaabbanne, hireen hamtuun daqiiqaa 78ffaa irratti Arsenaaliin mudatte gareen kuni taphattoota 9 qofa qabatee dirree irratti akka hafu ta’eera.
Tapha sadarkaa kanaatti, sanuu Cheelsii wojjiin, ammas Stanfoord Biriijitti, Arsenaal nama 9’n taphatee dhumni tapha kanaa maal akka ta’uu malu kan taphicha hin ilaalles tilmaamuun isa hindhibu. Arsenaal 2 -0’n injifatameeti kan Staanfoord Biriij gadi lakkisee baye.
Cheesliif goolii kiyyoo keessa kan marmarsan Kurt Zuumaa (daq. 53) fi Edeen Haazaard (daq. 90) dha. Cheelsiif kuni injifannoo guddaadha. Yeroo dheeraa booda Cheelsiin moo’atamuu irraa gara boqannaa injifachuutti kan deebi’e. Injifannoon kuni bara kana Priimer Liigii irratti Cheelsiif isa lammataati. Cheelsiin taphoota 5 geggeeffame keessaa 3 injifatamee tokko moo’atee, isa biraan wolqixa bayeeti qabii 4 qabatee hanga har’aatti sadarkaa 17ffaa irra kan ture.
Seenaa Priimer Liigiitti kan akka Arsenaaliifi Evertan taphattoonni kaardii diimaan tapha irraa irraa ari’aman hinjiru.
Yeroo as dhihoo asi Cheesiin Arsenaaliin irratti ol’aantumma isaa cimsataa kan dhufe fakkaata. Taphoota 8 Priimer Liigii Cheelsiin Arsenaaliin wojjiin taasise hunda irratti hinmoo’atame. Cheelsiin 5 injifatee 3 ammoo qixa baye.
Achuma Priimer Liigii irratti Manchastar Siitiin Weest Hamiin 2 – 1’n ni moo’atamaa jedhamee tasa hineegamne; sanuu mana isaatti. Weest Ham qilleensa cabbaawaa taphattootaafi daawwattoota staadiyoomi Itihaad keessa turanitti kan gadi lakkise taphni jalqabamee daqiiqaa 6ffaa (goolii Mooses) irratti ture. Osoo taphattoonni Manchastar rifaatuu jalqabaa irraa hindandamanne Sakhoon golii lammaffaa Weest hamiif kiyyoo keessa naqe.
Man Siitii ture taphaan ol’aantummaa kan fudhate. Kubbaan %70 harka Man Siitii turte. Yaalii goolii 27 godhus takka qofa kan kiyyoo keessa naquu danda’e, Man Siitiin. Gooliin takka injifatamuu jalaa kan isaan baraartu hinturre, garuu.
Gama biraatiin, Laa Liigaa Ispeenitti Riyaal Maadriid goolii KariimBenzemaa galcheen Granaadaa 1 – 0’n injifateera. Riyaal yaalii goolii ciccimoo 10 taasisus tan gooli-eegaa bira darbite takka qofa. Riyaal tapha har’aa kan geggeesse bakka taphattoonni bebbeekkamoon kanniin akka Sarjiyoo Raamos, Jaams Rodriigeezfi Beel madaayanii hirmaachuun hindandeennetti ture.
Previous articleFaaydaalee shunkurtii kanniin beektuu?
Next articleManchastar Yunaayitid garaagarummaa Man Siitii wojjiin qabu dhiphisee